२२ तोला सुन र २० रोपनी जग्गा भएका स्वास्थ्यमन्त्री तामाङ कति धनी कति गरिव ? – Satabdi News
होमपेज / मुख्य समाचार / २२ तोला सुन र २० रोपनी जग्गा भएका स्वास्थ्यमन्त्री तामाङ कति धनी कति गरिव ?
शुक्रबार, जेठ २८, २०७८ , शताब्दी न्युज
२७ जेठ २०७८, बिहीबार। कानुनमै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । सोही अनुसार मन्त्रालय सम्हालेपछि मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्रीबाट पदमुक्त भएलगत्तै प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्री बनेपछि के कति आम्दानी भयो र कुन शिर्षकमा खर्च भयो भनेर सार्वजनिक गरे । उनले सत्ता छाडेपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा धेरैले उनको तारिफ गरे ।
ज्ञवालीले मन्त्री बनेको समयमा कमाएको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेपछि उपप्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि इश्वर पोख्रेलले पनि आफ्नो कमाई र खर्च विवरण सार्वजनिक गरे ।
अहिले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त शेरबहादुर तामाङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा तामाङको परिवारसँग २० रोपनी जग्गा छ ।
उनले आफूसँग २२ तोला सुन रहेको बताएका छन् । उनको काठमाडौंको गोकर्णेश्वरमा घरसहितको जग्गा छ ।
You have reacted on "२२ तोला सुन र २० रोपनी जग्गा भएका स्वास्थ्यमन्त..." A few seconds ago